दिगो ब्रान्डहरू: तिनीहरू के हुन्, तिनीहरू कसरी प्रयोग गरिन्छ र उदाहरणहरू | हरियो नवीकरणीय ऊर्जा
फेसन उद्योग संसारको दोस्रो सबैभन्दा प्रदूषित उद्योग हो, र अधिक र अधिक कम्पनीहरू र डिजाइनरहरू अधिक जिम्मेवार उत्पादनमा दांव लगाइरहेका छन्। हालैका वर्षहरूमा फेसन उद्योगले द्रुत फेसनतर्फ मोडेको छ र बढ्दै गएको छैन भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यी सबैले सृजना गरेको हो दिगो ब्रान्डहरू जसले वातावरणको हेरचाह सुनिश्चित गर्दछ र तिनीहरूको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्दछ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई अवस्थित मुख्य दिगो ब्रान्डहरू, तिनीहरूका विशेषताहरू र तिनीहरूले वातावरणीय प्रभावलाई कसरी कम गर्न मद्दत गर्छन् भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौं।
1 दिगो ब्रान्डहरू
2 सबै भन्दा राम्रो दिगो ब्रान्डहरू
2.5 द प्लेया एण्ड क.
2.6 मेरी खराब
2.9 मेरो स्कर्ट
केही दशक पहिले, कपडा किन्न र हरेक दिन पहिलो पटक लगाउन लगभग असम्भव थियो। मूल्य र ठूला चेनहरूको अभाव, धेरै पहुँचयोग्य र जनताको लागि आकर्षक भएकोले, हामीलाई खरिद गर्दा थप विचारशील निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो। त्यहाँ समय संग 180 डिग्री परिवर्तन भएको छ। ठूला टेक्सटाइल चेनहरूले दिगोपनमा मद्दत गर्न र क्याप्सुल सङ्कलन गर्न स-साना कदम चालिरहेका छन्, त्यहाँ अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
सम्झनुहोस्, फेसन उद्योग तेल पछिको दोस्रो सबैभन्दा प्रदूषित उद्योग हो, र हाम्रो ग्रहले हामीमा दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार नगरी ठूला ब्रान्डहरूलाई टुक्राबाट कपडाहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्दैन। यस कारणका लागि, केहि डिजाइनरहरू, पसलहरू र स्टाइलिस्टहरूले काम गर्न तल जाने निर्णय गरेका छन्, एक मानक रूपमा पर्यावरण को लागी स्थिरता र हेरचाह संग।
यद्यपि अधिकांश दिगो ब्रान्डहरू अझै राम्ररी परिचित छैनन्, तिनीहरूका ग्राहकहरू बिस्तारै बढ्दै छन् र कामदारहरू र ग्रहका लागि उत्तम अवस्थामा बनाइएका हाम्रा कपडाहरूको महत्त्व महसुस गर्न थालेका छन्। यति धेरै कि केहि फर्महरूले आफ्नै दिगो संग्रह सिर्जना गर्न रोजेका छन्।
हामीले तल सिफारिस गरेका केही साइटहरूमा दिगो कपडाहरू किन्नको अतिरिक्त, तपाईंले यहाँ गएर वातावरण बचाउन सक्नुहुन्छ। पुरानो पसलहरू, रचनात्मक कार्यशालाहरू वा कपडाहरू आदानप्रदान वा भाडामा केही अनुप्रयोगहरूमा जुन पहिले नै सफल छन्। यसमा कुनै शंका छैन कि आज ग्रहको रक्षा गर्नु र अद्यावधिक राख्नु असंगत चीजहरू होइनन्।
हाम्रो देशमा, नैतिक र दिगो मूल्यहरू भएका अधिक र धेरै ब्रान्डहरू छन् जसले कपडाहरू उत्पादन गर्दछ जुन प्रयोग गर्न सजिलो मात्र होइन तर नयाँ पनि छ। हामी तपाईंलाई केही विचारहरू देखाउँछौं जसको साथ तपाईं ग्रहलाई विश्राम दिँदै आफ्नो वार्डरोब अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो दिगो ब्रान्डहरू
यस कम्पनीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो विरासत छोड्नको लागि वर्तमानको बारेमा सोच्नु हो। लाइफगिस्टले युरोपमा ग्लोबल अर्गानिक टेक्सटाइल स्ट्यान्डर्ड (GOTS) प्रमाणित कपडाहरू खरिद गर्छ, र म्याड्रिड हो जहाँ ढुवानीको कार्बन फुटप्रिन्टबाट बच्न सबै कपडाहरू उत्पादन गरिन्छ।
Ecoalf ले हाम्रो देशमा दिगो फेसनमा सबैभन्दा चिनिने नामको रूपमा स्थापित गरेको छ, हाम्रो सिमाना बाहिर पनि। यसको निर्माता, जेभियर गोयेनेचे, प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग नगरी उत्कृष्ट गुणस्तर र राम्रो स्वाद जारी राख्न सम्भव छ भनेर आफ्नो कपडाबाट प्रदर्शन गर्न चाहन्थे।
यो ब्रान्ड वातावरण प्रति 100% प्रतिबद्ध छ। यति धेरै कि तिनीहरूका सबै जुत्ताहरू बार्सिलोनामा डिजाइन गरिएका छन् र एलिसेन्टे नजिकैको कारखानामा काम गर्ने कारीगरहरूको काम हो, जसले तिनीहरूलाई निरन्तर काम गर्ने अवस्था र उत्पादन गुणस्तर जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।
यो अन्तिम समयको लागि, तिनीहरूले नोपल वा मकैको भुसीबाट बनेको जुत्ता लन्च गरे, जुन दिगो र शाकाहारी सामग्री हो। नयाँ र अभिनव विचार सफल हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
क्याटालान पौंडी पहिरन फर्म ग्रीष्म नजिकिँदै र तटको यात्रा आइपुग्दा सफलताको लागि तयार छ। यी टुक्राहरूको डिजाइनर Peque de Fortuny हो, जसले धेरै जोशका साथ बार्सिलोनाको स्टुडियोमा विशेष रूपमा उत्पादन गरिएको दिगो बाथरूम संग्रह सिर्जना गर्न व्यवस्थित गरेको छ।
द प्लेया एण्ड क.
क्रिस्टिना पिना द्वारा बनाईएको यो एकता फेसन परियोजना प्रकृति मा फोकस राख्छ। समुद्रसँग सम्बन्धित रिसाइकल गरिएको जैविक सामग्रीबाट बनेको कपडाको साथ, एक प्रक्रिया जसले प्रतिफल उत्पन्न गर्छ र त्यसपछि नाफाको एक हिस्सा सामाजिक परियोजनामा ​​दान गर्दछ, Playa ले एक स्ट्रिप गरिएको टी-शर्टलाई आफ्नो तारा कपडामा परिणत गरेको छ, वर्षौं वर्ष यो प्रेरित छ। विभिन्न आइकनहरू
कम्पनीले पछि छोड्यो छिटो फेसन, लुगा दिगो र सुन्दर हुन सक्छ भनेर देखाउँदै, किफायती मूल्यहरू कायम राख्दै र ठूला ब्रान्डहरूबाट प्रचलनहरू राख्दै। थप रूपमा, मारिया मालोले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि उनीहरूको वरपरका सबै कुराहरू बारे बढी सचेत हुने मानसिकता विकास गर्न आफ्ना प्रत्येक अभियानहरूको साथ प्रयास गर्दछ।
कम्पनी पुगेको छ फैशन उद्योग मा एक बलियो स्थिति। Alicante का डिजाइनरहरूले दिगो संसारमा एक कदम अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन् र वातावरणको पूर्ण सम्मानका साथ आफ्नो संग्रह बनाउन नयाँ कच्चा माल डिजाइन र प्रयोग गर्ने नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका छन्।
यदि तपाईं आफ्नो वार्डरोबमा प्रत्येक कपडाको विशिष्टताको कदर गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, यो निस्सन्देह तपाईंको मनपर्ने ब्रान्ड हुनेछ। यस परियोजनामा ​​विश्वभरका १२ कलाकारहरूद्वारा कोरिएका सीमित संस्करणका टी-शर्टहरू मात्र समावेश छन्।
मेरा सबै स्कर्टका टुक्राहरू तिनीहरू हाम्रो ग्रहको विभिन्न भागहरूबाट प्रेरित सीमित संस्करणहरू हुन् यसको प्राकृतिक स्रोत र यसको सिर्जनाकर्ताहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्न।
क्याटालान फर्म यसको टुक्राहरूको समयहीनताको लागि प्रतिबद्ध छ, गुणस्तरीय कपडाहरू सिर्जना गर्दै जुन कहिल्यै शैलीबाट बाहिर जाँदैन। जैविक ऊन र कपास, रिसाइकल कपडा र स्थानीय उत्पादन जस्ता दिगो सामग्रीको साथ, CUS कपडाहरू तपाईंको वार्डरोबमा अपरिहार्य "हुनुपर्ने" भएको छ।
इकोलोजी ब्रान्डले प्राकृतिक, पारिस्थितिक र रिसाइकल कपडाहरू प्रयोग गर्दछ तिनीहरूको डिजाइनहरूमा विस्तृत रूपमा ध्यान दिएर, तिनीहरू तपाईंको वार्डरोबमा आउने धेरै वर्षसम्म रहनेछन् भनी सुनिश्चित गर्दै।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्ने लुगा लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो ग्रहलाई प्रदूषित गर्ने उद्योगहरू मध्ये एक हो र दैनिक आधारमा सबैभन्दा बढी खपत हुन्छ। मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईंले अवस्थित मुख्य दिगो ब्रान्डहरू र तिनीहरूको कामका लाइनहरू के हो भन्ने बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » दिगो ब्रान्डहरू
कम्पनीहरूको लागि वातावरणको हेरचाह गर्ने आवश्यकताको बारेमा बढी सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। मेरो लागि, यो ठूला कम्पनीहरू हुन् जसले हाम्रो ग्रहलाई प्रदूषित र सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउँछन्।
हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
सुमीलाई जवाफ दिनुहोस्